နေ့: အောက်တိုဘာလ32019
Kocaeli တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်ဗဟိုအပြင်ဘက်ရပ်ကွက်တွင်နေထိုင်သောနိုင်ငံသားများ၏သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဖြေလျှော့ဖို့, မြို့ပြစင်တာများအတွက်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးစီမံကိန်းများဖို့အရေးကြီးပုံကိုပေးသည်စီမံကိန်း၏လုပျငနျးနေဆဲဖြစ်သည်။ အကြား link ကိုလမ်းမပေါ်တွင် Chirag နက်ရှိုင်းသောရပ်ကွက်ရပ်ကွက်ခရိုင် Cavuslu ဖွငျ့ဤဦးတည်ချက်အတွက်ပင်လယ်ကွေ့ခရိုင် [ပို ... ]
Marmara Marmara ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲပြည်ထောင်စုကစီစဉ်အောက်တိုဘာလအကြား Sakarya မြို့တော်ဝန် Ekrem Yüce 1-3 အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာမြို့ပြဖိုရမ်ပါဝင်ခဲ့။ '' သမ္မတတိုက်တွန်း: အတူတကွခေတ္တ, အတူတကွစဉ်းစား '' livable မြို့ဖန်တီးရန် ", အဲဒီ session ဥက္ကဋ္ဌ Ekrem Yüceမှာ, [ပို ... ]
ဝန်ထမ်းများအကြားစည်းရုံးဘောလုံးပြိုင်ပွဲအောက်ရှိ '' လူမှုလှုပ်ရှားမှုများ '' samulaş Samsun တဲ့ Metropolitan မြူနီစီပယ်, TAMGACI ထံမှSAMULAŞဖွငျ့န်ထမ်းများအတွက်ဖွဲ့စည်းဘောလုံးပြိုင်ပွဲအတွက်ရင်သပ်ရှုမောဖွယ်ရာ KICK_OFF ယူနစ်ကိုက်ညီရန်ရှိသည်မှသွား Atakum ခရိုင်မြို့တော် Belediyespor Facility အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ [ပို ... ]
Turhan, 15 ဇူလိုင်လအာဇာနည်နေ့နှင့် Fatih Sultan Mehmet တံတားများငလျင်အဖြစ်ကိုခိုင်ခံ့စေညွှန်ပြနေချိန်တွင်သူကဆိုသည်: "တဖန်တုံ2တထောင် 475 နှစ်ပေါင်းအောက်ခြေ seating ထောက်ခံမှုများတိုးချဲ့တစ်ချိန်ကအကြောင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေခြင်းငှါမြေကြီးလှုပ်ခြင်းမှခံနိုင်ရည်ဖြစ်မည်ဟု, လဲကျ-ကြိုတင်ကာကွယ်ရေး [ပို ... ]
စီးပွားရေးနှင့်ကူးသန်းရောင်းဝယ်ရေးKarabükကုန်သည်ကြီးများနှင့်စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များဥက္ကဋ္ဌ Mehmet MESC ရထားပို့ဆောင်ရေးနည်းပညာKarabük၏ Institute ၏ဖွဲ့စည်းခြင်းနှင့် ပတ်သက်. သတင်းစာဖြန့်ချိထုတ်ပြန်ခဲ့သည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတသည် MESC သည်ဤစကားပါဝင်သည်မူကြောင်းကိုကလည်း, ကျွန်တော်မာနထောင်လွှားနှင့်အတူသယ်ဆောင်သောငါတို့စက်မှုလုပ်ငန်း၏ "အသစ်နယ်ပယ် [ပို ... ]
အဆိုပါ Yavuz Sultan Selim တံတားနှင့်အများပြည်သူနှင့်အတူမျှဝေခဲ့သည်သက်ဆိုင်ရာလျှောက်လွှာအားမိမိတုံ့ပြန်မှုအတွက် CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက်Adıgüzelဂုဏ်ထူးဆောင်သမ္မတအိမ်တော်ဆက်သွယ်ရေးစင်တာ (မြက်) ။ Adıgüzel DCH တံတားအားဖြင့်ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရနေ့စဉ်ပျမ်းမျှအား 1 800 တထောင်သန်းပျက်စီးဆုံးရှုံးမှု၏တန်ဖိုးရှိနိုင်ငံသားရန် [ပို ... ]
အဆိုပါ CHP သွားရောက်ခြင်းအားဖြင့်ရောက်ရှိခဲ့သည်ကုမ္ပဏီအရာရှိတွေကစီမံကိန်းနောက်ဆုံးပေါ်အခွအေနေကိုပြောသည်ဝေဖန်လိုက်သည်။ အစားKırkpınarlılar Bursa ထူးခြားတဲ့ကေဘယ်လ်ကားငါ၏အခွင့်အာဏာရှိကြ၏, "စီမံကိန်းတည်နေရာ 1 မီတာပင်နူးညံ့သောမြည်းသည်-ပုံနှိပ်ဖျက်သိမ်းမယ့်ဘူတာဆန့်ကျင် cable ကိုကားတစ်စီးစီမံကိန်း၏ဆောက်လုပ်ရေးထွက်လုပ်ငန်းစဉ်များနဲ့ကြိုးပမ်းဆောင်ရွက်သစ်က de [ပို ... ]
အောက်တိုဘာလ Kartepe မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန်သာမန်ကောင်စီအစည်းအဝေးတွင်သမ္မတ av.m.mustaf Kocaman မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ အောက်တိုဘာလအတွက် Kartepe မြူနီစီပယ်သာမန်ကောင်စီအစည်းအဝေး Kocaman သမ္မတ av.m.mustaf Kartepe မြို့တော်ဝန်မှာကျင်းပခဲ့ပါတယ်။ ပါလီမန်6အစီအစဉ်ကို item အစည်းအဝေးတှငျဆှေးနှေးခဲ့သညျဆုံးဖြတ်လိုက်ပါသည်။ [ပို ... ]
TAYSAD ဥက္ကဋ္ဌ Alper Hook, Volkswagen ကပြန်လည်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံပါလိမ့်မည်တူရကီအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုများနှင့်အခြားကုမ္ပဏီတစ်ခုကဒိုမီနို effect ကိုဖန်တီးနိုင်ကဆိုသည်။ Volkswagen က, ကမ္ဘာ့အကြီးဆုံးမော်တော်ယာဉ်ထုတ်လုပ်သူ, လဘို့အကြောင်းကိုစကားပြောလျက်ရှိသည်သစ်ကိုစက်ရုံအတွက်ရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုအတွက်တူရကီကိုရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ဂျာမန် [ပို ... ]
Samsun, Sivas မီးရထားလိုင်းအဘယ်ကြောင့်ဖို့မအောင်မြင်ဘူး?
Samsun Sivas မီးရထားလမ်း၏အဘယ်ကြောင့်အဖွင့်အံ့သြနေသည်။ အကြောင်းရင်းကိုဖွင့်လှစ်-တန်းကျမ်းပိုဒ်သက်ဆိုင်သောဖြေရှင်းမရနိုငျတစ်ခါတစ်ရံအချို့ကိုလည်းမြေပြိုမှုမှဖြစ်ပွားခဲ့သည်ချည်ထားကြသည်။ ဤအတောအတွင်းစီမံကိန်းအဆင့်ကူးစည်းမျဉ်းရဲ့အဆုံးမှာဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည်အဘယ်ကြောင့်အံ့သြ, နောက်တော်သို့လိုက်သည်မဟုတ် 2018 [ပို ... ]
လမ်းများသို့ပြင်းအား 5.8 အတွက်မြေငလျင်ပြီးနောက်ရပ်စဲမြေအောက်ရထားဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအတွင်းပေါ်ထွန်းစေမည်အကြောင်း Istanbulites အန္တရာယ်များထပ်မံအများပြည်သူအစီအစဉ်သို့ရောက်ကြ၏။ သတ္တုတွင်းအင်ဂျင်နီယာများ၏ကုန်သည်ကြီးများအသင်းကနေကြေညာချက်မှာတူးဖော်အကြောင်းကိုလုပ်ဖို့ဖြစ်နိုင်ခြေအန္တရာယ်ကိုနှင့်အဘယ်သို့ဆိုင်ဖို့မြေအောက်ဥမင်လိုဏ်ခေါင်းအစပျိုးနေရာ [ပို ... ]
Bursa တဲ့ Metropolitan မြို့တော်ဝန် Alinur Aktas, သူတို့က, သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအတွက်အားလုံးငွေကြေးလွှဲပြောင်းမှုမှာဒစ်ဂျစ်တယ်အဖြစ်ဖန်ဆင်းခံရဖို့ပေးရန်ပြင်ဆင်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည် "Bursalılarအင်တာနက်ပေါ်တွင်နှင့်မိုဘိုင်းဖုန်းများမှတဆင့်အွန်လိုင်းအားလုံးသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလုပ်ငန်းများအဖြစ်လုပ်ဆောင်နိုင်တော့မည်မကြာခင်ပဲအပြီး," ဟု၎င်းကပြောသည်။ နိုင်ငံတော်သမ္မတဦးသိန်းစိန် Aktas, Marmara ၏အဓမ္မလုပ်အားပေးခိုင်းစေမှုများရှိဆဲ [ပို ... ]
Density Metrobus လျှော့ချဖို့နယူးအလုပ်သမားထံမှİETT ...
IMM သမ္မတ Ekrem İmamoğlu၏အမိန့်ဖြင့် Metrobus ပေါ်တွင်လေးလံသောဝယ်လိုအားနှင့်တွေ့ဆုံရန်ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတစ်ခုစီးရီးစတင်ဆောင်ရွက်ခဲ့သည်။ တောင်မှခရီးသည်တိုးတက်မှုနှုန်းÜsküdarဖြစ်စေတဲ့ -3မှ Altunizade Sancaktepe မီထရိုလိုင်းဘူတာတစ်ခုချင်းစီကိုအချိန်အချည်းနှီးသောဘတ်စ်ကားသည်လူကိုစေလွှတ်ခံရဖို့စတင်ခဲ့ပါသည်။ ဘူတာရုံ [ပို ... ]
Esenboga လေဆိပ်မှာ Metro လမ်းကြောင်း, စခန်းများနှင့်ပရိုမိုးရှင်းဗီဒီယိုကို။ မြို့လယ်မြေအောက်ရထားစီမံကိန်းကထံမှသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလွယ်ကူချောမွေ့ရန်တူရကီအတွက် Esenboga လေဆိပ်မှာ 1 ဘီလီယံကုန်ကျမည်ဖြစ်သည်။ မြေအောက်ရထားစီမံကိန်း Esenboga လေဆိပ်မှာ Square ကိုလခြမ်းနီအမျိုးသား Will နှင့်အတူဇူလိုင်လ 15 အကြားကျင်းပလိမ့်မည် [ပို ... ]
သမိုင်းအောက်တိုဘာလ31932 Izmir ဆိပ်ခံတံတားကုမ္ပဏီအတွက်ယနေ့တွင်ပြည်သူပိုင်ခဲ့သည်။ အလားတူရထားသတင်းယနေ့တွင်နှင့်အခြား haberlertarih အကျိုးစီးပွားဖြစ်နိုင်သည်: အောက်တိုဘာလ31932 Izmir ဆိပ်ခံတံတားကုမ္ပဏီပြည်သူပိုင်ခဲ့သည်။ 03 / 10 / 201231932 အောက်တိုဘာလmillileştirildi.tarih Izmir ဆိပ်ခံတံတားကုမ္ပဏီယနေ့တွင် [ပို ... ]